तथ्य र प्रमाण नभएपछि आक्रोस पोख्दै भारतीय मिडिया | Dainik Hub Dainik Hub
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:१४
काठमाडौं, ८ जेठ – नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाहरु नेपालबिरुद्ध नियोजित आक्रमणमा उत्रेका छन् । भारत सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा आफूलाई मान्य नरहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्ताको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारतीय संचारमाध्यमले भने नेपालको नयाँ नक्सा र अतिक्रमित भूभागफिर्ता ल्याउने अभियानलाई चीनद्वारा संचालित भन्दै अतिरञ्जित र तथ्यहिनप्रचार गरिरहरेको छ ।
भारतका गलत बुझाई र प्रचारलाई तथ्यगत रुपमा हेरौं..
दोश्रो, भारतीय सरकारको भनाई छ–नेपालको नक्सा एकतर्फी छ । छ महिनाअघि भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्साजारी गरेको थियो । त्यसमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुुरा भारतको भूगोलभित्र राखिएको छ । के भारतले उक्तनक्सा सार्वजनिकगर्दा नेपाललाई सोधेको थियो ? के त्यो नक्सा नेपालसँगको सहमतिमा जारी गरिएको थियो ? भारतले आफ्नो नक्साजारी गर्दा नेपाललाई सोध्नु नपर्ने तर नेपालले जारी गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने हो र ? त्यसैले यस्तो तर्कको अर्थ छैन ।
तेश्रो, अचानक कसरी नेपालले यो नक्सा जारी गर्यो ? भारतीय मिडियाको प्रचारयुद्ध छ । यो नक्सा अचानकजारी गरिएको होइन । यो योजनावद्ध हो । कहिले नेपालको भूमिभएर भारत र चीनले व्यापार विस्तारको सहमति गर्ने, कहिले नेपालको भूभाग भएर भारतले सडक बनाउने । कहिले नेपालको भूभाग समेटेर भारतले नक्सा बनाउने । नेपालले वारम्वार वार्तामा बस्न आग्रहगर्दा नमान्ने । के नेपाल यो सबै मुकदर्शक भएर हेर्न सक्छ ? सक्दैन । त्यसमा पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रि स्वार्थको नेतृत्वगर्नुभएका प्रधानमन्त्री यो सबै टुलुटुलु हेरर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । त्यहीभएर सरकारले योजना अनुसारनै यो अद्यावधिक नयाँ नक्साको तयारी गरेको हो र सार्वजनिक गरेको हो ।
यर्थाथ के हो भने नेपालले नयाँ नक्साजारी गरेपछि भारत प्रतिरक्षात्मक भएको छ । भारत प्रतिरक्षात्मक भएका प्रमाण भारतीय संचारमाध्यम र रणनीतिक बिश्लेषकका सतही टिप्पणीहुन् । भारतीय सबै संचारमाध्यममाजति रिर्पोट आएकाछन् र जति सामरिक भनिएका बिश्लेषकले बोलेकाछन्, तीनमा नेपालको नक्सा गलत भन्न सक्ने तर्कसमेत छैन, प्रमाण त परको कुरा भयो । उनीहरुले के आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको भूभाग भन्ने आधार कतै दिन सकेका छैनन् । स्न १८६० को सुगौली सन्धिसहित करिव दुई दर्जन सन्धी नेपालले प्रमाणका रुपमा राख्दा भारतका तर्फबाट तीनको खण्डन भएको छैन । एउटा पनि ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण भारतले नेपालसँग प्रस्तुतगर्न सकेको छैन ।
भारतीय संचारमाध्यमले त्यस्ताप्रमाण भेटेको भए मच्चीमच्ची ती दस्तावेज देखाएर वहस गर्ने थिए तर छैन । खाली रोटीबेटीको सम्वन्ध, बिशिष्ट सम्वन्ध र दाजुभाईको सम्वन्ध भएको नेपाललाई चीनले भारतबिरुद्ध भड्कायो भन्ने खालका आधारहिन रिर्पोटबाहेक केही आएका छैनन् ।
जव आफूसँग प्रमाण हुँदैन, तथ्यहुँदैन, मान्छे डराउँछ, आक्रोसित हुन्छ र धम्कीदिन थाल्छ । अहिले भारतीय मिडिया र बिश्लेषकका प्रवृति त्यसैका उपज हुन । भोलि वार्ताको टेवलमा बस्दा नेपालले प्रमाण पेश गर्छ, त्यसको काउन्टर कसरी गर्ने भन्ने प्रमाण खोज्दापनि भारतीयले भेटेका छैनन । त्यसैले त्यही आक्रोसको चिड्चिडाहट भारतीय मिडियामा व्यक्त भएको हो ।